lundi, 30 septembre 2019 20:29
Mahabo – Menabe: Maloto ny rano jifain’ny mponina
Fahanteran’ny fitaovana sa ny tsy fiasana fanadiovan-drano ? Maloto, tsy ara-pahasalamana ny ranon’ny Jirama tonga eny amin’ny mpanjifa eto an-drenivohitry ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe sy ireo tanàna manodidina.
Ireo zaza madinika sy zokiolona marefo ara-pahasalamana no tena lasibatra, ka anairan’ny mponina ny tomponandraikitra.
lundi, 30 septembre 2019 20:15
Toliara: 16 volana tsy nandray karama ny mpiasa Kaominina
Mitokona ny mpiasan’ny Kaominina Ambonivohitr’i Toliara. Nametaka sorabaventy izy ireo mampahafantatra fa karama 16 volana izao no tsy noraisin’izy ireo. Nikatso ny asa aman-draharaha tao amin’ny Lapàn'ny Tanàna androany 30 septambra 2019.
lundi, 30 septembre 2019 20:03
Sambava: Notolorana mari-pankasitrahana ireo vehivavy tia fivoarana
Nihaona sy nanolotra mari-pankasitrahana ho an'ireo vehivavy nahavita fiofanana momba ny fanamboarana mofomamy sy fandravahana (décoration) teto Sambava ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah.
Fikambanam-behivavy miisa 400 no tohanan'ny ministeran'ny mponina tamin'ny alalan'ilay tetik'asa « Viavy miralenta sady mivoatra ».
lundi, 30 septembre 2019 20:00
Polisim-pirenena: Nanao rodobe nanome ra
Nanao hetsika lehibe ny Polisy rehetra manerana ny Nosy, androany 30 septambra 2019, izay ivon’ny fankalazana ny faha-58 taonan’ny Polisim-pirenena. Ho an’ny teto Antananarivo renivohitra dia Polisy miisa hatrany amin’ny 500 no nanome ra tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha, notarihin’ny Minisitry ny filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police Rafanomezantsoa Roger.
Nanao fanomezan-dra faobe toy izany koa ny Polisy tany amin’ny faritra Atsinanana sy Boeny.
Polisim-pirenena akaiky ny vahoaka hatrany no tanjona, ka izao hetsika fanomezana ra izao no isan’ny hetsika hanampiana ny vahoaka amin’ny famonjena ny ain’izy ireo.
Ny sabotsy 28 septambra 2019 dia efa nisy ny fiarahana mihazakazaka ho mariky ny firaisankina sy fahavononana nasehon’ny Polisim-pirenena manoloana ny adidy masina miandry azy ireo.
Feno ny programan’i Nantenaina, kandidan’ny IRD, mitondra ny laharana voalohany (01) amin'ny bileta tokana eto Toamasina I, amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna, tamin’ity herinandro ity, ary nisandrahaka sy nahasahana sehatra maro izany.
Nanome rà niaraka tamin’ny ekipany ; nanolotra fanomezana ireo mpianatra mendrika. Nitsidika toerana maromaro, nifanantona tamina vondron’olona sy fikambanana maro, nihaona tamina sokajin-taona sy sokajin’asa maro. Nitsidika fiangonana. Nampanao « cours gratuit » ho an’ny mpianatra hanala fanadinana bakalôrea.
Tonga dia « action » ny fanombohan’i Nantenaina ny «pré-campagne».
lundi, 30 septembre 2019 15:27
Parc Ankarafantsika: Voafehy tanteraka ny afo tamin’ireo toerana telo nisy firehetana
Efa tamin'ny 27 septambra no voalaza fa tsy nisy afo nirehitra intsony ao amin’ny Parc Ankarafantsika. Toerana telo no nisy afo, dia tao Ampijoroa, Ampombilava ary Andranobaka. Efa samy voafehy avokoa ny afo ary maty tanteraka, teo anelanelan’ny 23 ka hatramin'ny 26 septambra 2019. Manana valerana 103 ha eo ny ala nolalovan'ny afo tamin’ireo toerana ireo.
Niara-nientana namono ny afo ny Fokonolona, ny « brigade de feu », ny « pompiers » an'ny Faritra, ny mpitandro filaminana, ary ny solontenam-panjakana aty an-toerana.
lundi, 30 septembre 2019 15:14
Morarano-Chrome: Tovolahy iray maty an-drano
Omaly alahady 29 septambra 2019 no nitranga ny loza tao Ambohimanarivo, Kaominina Morarano-Chrome, Distrikan’i Amparafaravola, amin’ny lalana miazo an’Anosiboribory. Tovolahy iray no tafahitsoka tao amin’ny barazy, ka namoy ny ainy.
lundi, 30 septembre 2019 14:40
RFI Ivato: Andron’ny Masindahy Misely
Notontosaina omaly 29 septambra 2019, teny amin'ny Rezimanta voalohan’ny Hery Vonjy Taitra na 1er RFI Ivato, Tobin’ny mpilatsaka elon`aina, ny andron`ny Masindahy Misely mpiaro ireo mpilatsaka elon`aina. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, Jeneraly Rakotonirina Richard.
Manana ny maha izy ity Rezimanta ity, ary manao izay azony atao ny fitondram-panjakana amin'ny fampitaovana azy amin'ny fandavorarina ny asa sahaniny.
Nisy ny fizarana mari-pahatsiarovana ho an`ireo miaramila nahatontosa ny fanompoana ny Tanindrazana.
lundi, 30 septembre 2019 14:07
Ady amin’ny doro tanety: Hanolotra fiaramanidina ny ONG Fanamby
Nampahafatarin’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, Alexandre Georget tamin’ny diany teto Morondava fa vonona hiady amin’ny afo, izay fahavalon’ny ala, ny ONG Fanamby, ka hanolotra fiaramanidina famonoana afo ho an’ny fitondram-panjakana.
Ankoatra izay dia miaramila sy zandary any amin’ny 100 lahy no miara-miasa amin’ny ONG Fanamby aty amin’ny faritra Menabe Antimena manao ny « opération » izay efa nanomboka tamin’ny alarobia lasa teo.
lundi, 30 septembre 2019 11:49
La filière vanille et son impact socio-économique dans les zones productrices de Madagascar
La vanille, parmi les rares produits au monde, qui fait de la grande île une renommée mondiale. Cela est à la fois en termes de quantité et de qualité du produit. Plus précisément, la production de Madagascar est estimée à 82% de la demande mondiale de ce précieux épice, soit une production qui avoisine les 1 500 tonnes de vanille exportable par an. Depuis un certains moments, l’arôme de la vanille est devenu un produit de luxe fortement convoité, elle occupe la deuxième place de l’épice la plus chère au monde après le safran.
L’année 2013 a marqué le début de marathon du flambé de cours mondial de la vanille. Le prix du kilogramme a passé de 50 dollars en 2013 jusqu’à 600 dollars en 2018. L’exportation de cette épice occupe une place majestueuse dans l’économie de Madagascar, car elle représente les 5 % de son PIB en 2018.